छनौट, उपकरणहरूको खरीद | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: विकल्प, उपकरणहरूको खरिद
पूर्ण-फ्रेम एसएलआर र एन्ट्री-स्तरीय एसएलआर बीच के फरक छ? +
पूर्ण-फ्रेम DSLR र एउटा प्रविष्टि-स्तर DSLR बीच के भिन्नता छ? + त्यहाँ 60० बाय 45aको म्याट्रिक्सको साथ क्यामेराहरू छन्, जसमध्ये छनौट गर्नुहोस् यदि तपाई एम एम अफानासेनकोव द्वारा गुगललाई लेख "फोटोको बारेमा तर्कसंगत" छ भने। सबैजना त्यहाँ ...
समायोजन के हो
के समायोजन भनेको क्यालिब्रेसनको जस्तो प्रायः उस्तै हो, तर अधिक स्पष्ट रूपमा http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=110eले समायोजन प्रदर्शन गर्दैन यदि लेन्सले क्वालिटीसँग मेल खाँदैन भने, फिर्ता गर्नुहोस्। (जर्मन न्यायकर्ताबाट प्रमाणित गर्न), जाँच गर्नुहोस् र ...
वहाँ 1.2-1.5V भोल्टेज संग कुनै rechargeable लिथियम लिथियम आयन एए बैटरी हो?
त्यहाँ 1.2-1.5V AA रिचार्जेबल लिथियम ली-आयन ब्याट्री छ? होईन, यो अवस्थित छैन - ली-आयन ब्याट्रीमा voltage.3,7V को सेल भोल्टेज छ र यसलाई कम बनाउने कुनै तरिका छैन। सत्य, मैले सुनेको ...
Zenit-E क्यामेरा औसत कति हुन्छ?
Zenit-E क्यामेराको औसतमा कति खर्च हुन्छ? र यहाँ क्यामेराको लिंक छ। यो सत्य हो कि, अप्रिल १ को समाचार, जुन यो थियो, सुझाव दिन्छ ... म व्यक्तिगत रूपमा क्यानन EOS use 1० प्रयोग गर्दछ। अब तपाईं यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ ...
क्यामेरामा 1 / 2.3 म्याट्रिक्सले के गर्छ र यसले कस्तो असर गर्छ? र कुन म्याट्रिक्स राम्रो छ?
क्यामेरामा १ / २.1 म्याट्रिक्सको अर्थ के हो र यसले के असर गर्छ? र कुन म्याट्रिक्स राम्रो छ? खुशीका छुट्टिहरु! १ / २.2.3 अझै सानो म्याट्रिक्स होईन, तपाई के लेख्नुहुन्छ? यो ...
कुन एए ब्याटर उत्तम हो?
कुन एए ब्याट्री सबैभन्दा राम्रो हो? Varta, सान्यो, ऊर्जा, Durasel यदि तपाईं वास्तव मा लामो समय को लागी चार्ज गर्न आवश्यक छ, त्यसोभए तपाईंले Varta R2U 2300 mah लिनु पर्छ, तिनीहरूले प्रति वर्ष १ 15-२25% मात्र गुमाउँछन् ...
एक क्यामेरा चयन गर्न को लागि मदद र क्यान्सर शटटाट sx410 को डीएसएलआर को प्रशंसक हो, कृपया परेशान न गर्नुहोस:
क्यानन पावरशट sx410 को लागि वा यसको बिरूद्ध क्यामेरा छनोट गर्न मद्दत गर्दछ DSLR का फ्यानहरू, कृपया चिन्ता नलिनुहोस्: तपाईले पहिलो छनौट गर्नु पर्छ उच्च गुणवत्ताको फोटो वा फोटाहरू महान साथ ...
एक व्यापक कोण लेंस को मतलब छ र कसरि सामान्य देखि फरक छ ???
फराकिलो ए le्गल लेन्सको अर्थ के हो र यो कसरी नियमितबाट फरक छ ??? फिक्स्ड फोकल लेन्सको दृश्य कोणको अनुसार विभाजन हुन्छ। चौडा कोण लेन्स त्यस्ता लेन्सको अवलोकन कोण 60० डिग्री भन्दा बढी हुन्छ (फोकल लम्बाइ अप ...
AA LR6 र HR6 ब्याट्रीहरू। फरक के हो?
AA ब्याट्री LR6 र HR6। के फरक छ? HR6 एक रिचार्जेबल ब्याट्री हो LR6 एक गैर रिचार्जेबल क्षारीय ब्याट्री हो। तदनुसार, पहिलो अपरेटिंग भोल्टेज दोस्रो १. vol भोल्टको लागि १.२ भोल्ट हो। को लागि ...
कसरी शटर गति को जाँच गर्न को लागि Canon 600D ??
Canon 600D मा शटर माइलेज कसरी जाँच्ने? rakso The विचारक (8765 XNUMX) ले गलत जवाफ दियो। सूर्य उसको निर्देशन अनुसार गरिएको थियो र यहाँ परिणाम नि: शुल्क कार्यक्रम EOSinfo छ। यसलाई राक्सो सल्लाहमार्फत प्रयास गरियो, आईई एक्सप्लोरर मार्फत, ...
आईफोन 5S मा भिडियो जब कुनै आवाज छैन
आईफोन S एस मा भिडियोको साथ कुनै आवाज छैन धेरै, धेरै माफ गर्नुहोस्! हेर्नुहोस्, सायद तपाईसँग एउटा सुध्रिन छ। तपाईले फोनको पछाडिको चिप हटाउनु पर्छ र त्यहि हो, समस्या समाधान भयो।
त्यहाँ USB-> फायरवायर एडेप्टरहरू छन्?
त्यहाँ USB-> फायरवायर एडेप्टरहरू छन्? प्राविधिक रूपले सम्भव छैन। म सोल्डरिंग सम्पर्कहरूको स्तरमा सोच्छु, हो, यो १1394 को साथ प्रत्यक्ष Schaub हो र USB मा - IMMO परी कथाहरू सबै फरक-फरक भोल्टेजदेखि प्रोटोकलसम्म छन् ...
व्हेल लेंस के हो? यो किन व्हेल भनिन्छ र क्यान्सर eos 450 डी शरीर को लागी छनौट गर्न कुन लेन्स राम्रो छ? धन्यवाद!
व्हेल लेन्स के हो? किन यसलाई ह्वेल लेन्स भनिन्छ र कुन लेन्सहरू क्यानन ईओएस 450० डी बडीको लागि उत्तम हो? धन्यवाद! http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7605 Kit - set (अंग्रेजी)। किट क्यामेरा + हो ...
U1 र U3 4K Panasonoc G7 भिडियोको लागि फ्लैश कार्ड ढाँचाहरूमा फरक फरक छ?
U1 र U3 Panasonoc G4 7K भिडियोको लागि फ्ल्याश कार्ड ढाँचामा महत्त्वपूर्ण छ? किन अनुमान? उत्तम लिनुहोस्, यो बचत गर्नु लाभदायक हुँदैन मानकको अनुरूप, यूएचएस वर्गले * न्यूनतम * गति परिभाषित गर्दछ ...
म क्यामेरा किन्न चाहन्छु। राम्रो, तर सस्तो। त्यसैले बोल्न, व्यावसायिक फोटोग्राफीमा पहिलो चरण लिनुहोस्।
म क्यामेरा किन्न चाहन्छु। राम्रो तर सस्तो। त्यसो गर्न, पेशेवर फोटोग्राफी को दिशा मा पहिलो कदम चाल्नुहोस्। यदि यो तपाईंको पहिलो डिजिटल क्यामेरा हो र तपाईंले फोटोमा पैसा कमाउन सेट गर्नुभएको छैन भने - कुनै पनि खरीद गर्नुहोस् ...
Epson stylus फोटो मुद्रक RX610 सँग नजुल कसरी सफा गर्ने?
एपसन स्टाइलस फोटो RX610 प्रिन्टरमा नोजलहरू कसरी सफा गर्ने। कारतूसहरू हटाउनुहोस्, नोजल टाउको भित्र हेर्नुहोस्। डिस्पोजेबल सिरिन्ज लिनुहोस् (सुई बिना), ड्रपर्सबाट होजहरू काट्नुहोस्, हेर्नुहोस्। oses. सिरिजमा होजहरू राख्नुहोस्, ...
USM लेन्स के हो? एसटीएम लेन्स के हो? कसरी USM लेन्स STM भन्दा फरक छ? क्यानन कुन एक राम्रो छ ...
USM लेन्स के हो? एसटीएम लेन्स के हो? कसरी एक USM लेन्स STM भन्दा फरक छ? क्यानन कुन चाँहि राम्रो छ ... एक अल्ट्रासोनिक ड्राइभको साथ लेन्सहरू संक्षेप USM नाममा चिन्ह लगाईन्छ। अल्ट्रासोनिक ड्राइभ प्रणाली ...
कसरी मोनपोड स्व्सियहरुको लागी चार्ज गरिएको छ वा निर्धारित गर्ने?
सेल्फी स्टिक चार्ज गरिएको छ वा छैन भनेर कसरी निर्धारण गर्ने? मैले चार्जमा राख्छु, एलईडी रातो हुन्छ, र दस सेकेन्ड पछि एलईडी बाहिर जान्छ र मोनोपोडले चार्ज गर्दैन। के गर्ने? निर्देशनका अनुसार अधिकतम समय ...
भिडियोको लागि कस्तो क्यामेरा राम्रो छ?
भिडियो क्यामेराका लागि कुन क्यामेरा लिन उत्तम हुन्छ? १-15-२०,००० जोड्नुहोस् र एक सोनी NEX VG20E खरीद गर्नुहोस् यो फिल्मि when गर्दा तपाईंको हातहरू फुकाल्छ ... र चित्र कहिल्यै नराम्रो हुने छैन ... का लागि ...
प्रकाश इकाई लक्स कसरी छ?
कसरी रोशनी लक्स को एकाई को लागी खडा छ? भिडियो क्यामेरामा, यो प्यारामिटरले संकेत गर्दछ कि यस्तो प्रकाश अवस्थामा क्यामेराले निर्दिष्ट आवाज स्तरको साथ भिडियो प्राप्त गर्दछ। यो स्तर के हो - प्रत्येक कम्पनी बिभिन्न क्यामेराका लागि ...
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,600 प्रश्नहरू।